In Lionel Messi Uu Waxa Uu Doono Ka Sameeyo Garoonka, Xaalada Fiican Ee Uu Isagu Ku Jiro, Muhiimada Kulanka Camp Nou Iyo Willian Borges Oo Waxyaabo Kale Ka Hadlay. – GOOL24.NET
In Lionel Messi Uu Waxa Uu Doono Ka Sameeyo Garoonka, Xaalada Fiican Ee Uu Isagu Ku Jiro, Muhiimada Kulanka Camp Nou Iyo Willian Borges Oo Waxyaabo Kale Ka Hadlay.
Xiidga khadka dhexe ee kooxda Chelsea Willian Borges da Silva ayaa doonaya inuu qoro cutub cusub oo taariikhi ah, kulanka lugta labaad ee wareega 16-ka tartanka UEFA Champions League-ga oo kooxdiisa Blues caawa kula ciyaari doono Barcelona garoonka Camp Nou.
Kulankii lugta hore ee ka dhacay garoonka Stamford Bridge ee magaalada London ayaa kusoo idlaaday barbaro 1-1, Willian ahaa xidigii hogaanka u dhiibay kooxdiisa Blues kadib markii uu dhaliyay goolka daah furka ee ciyaarta inkasta oo Lionel Messi uu goolka Willian kansalay si uu Barcelona u siiyo fursada fiican ee ay kulanka Camp Nou haysato.
29 jirkan reer Brazil ayaa kahor kulanka caawa wuxuu kasoo hor muuqday saxaafada wuxuuna ka hadlay kulanka ay Barcelona martida u yihiin wuxuuna yidhi: “Kulan aad u adag ayaa ina sugaya, waa inaan soo bandhignaa qaab ciyaareed wanaagsan, si aan ugu soo gudubno wareega xiga ee tartankan”.
Willian Borges ayaa hadalkiisa intaas kusii daray: “Dabcan, waan ku faraxsanahay, qaab ciyaareedka aan haatan bixinayo iyo goolasha aan dhalinayo, laakiin waxaan doonayaa wax ka badan intaas, dabcan waxaan xushmeynayaa kooxda Barcelona, waa koox weyn sida Chelsea, waxaan dooneynaa inaan qabsano shaqadeena isla markaana aan qaadano kulan muhiim ah”.
Willian oo ka hadlaya Barcelona iyo awooda Lionel Messi ayaa yidhi:” Anagu waanu ognahay tayada Barcelona. dabcan waxaa waajib nagu ah in aanu isha ku hayno Messi, sababtoo ah waa ciyaartoy wayn, waxa uu doono ayuu garoonka ka dhex samayn karaa, waxaana waajib nagu ah in aanu naftayada u diyaarino, laakin sidoo kale kooxda oo dhan”.
Willian ayaa shan gool soo dhaliyay shantii kulan ee ugu danbeeyay ee uu ku soo bilawday shaxda Antonio Conte waxaana ka mid ah goolashii uu ka soo dhaliyay kooxaha Barcelona iyo Manchester United iyada oo markale la filayo in uu kulankan Camp Nou ku soo bilaaban doono.
Tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa ka walwalsan xaalada uu Willian ku jiro ee aadka u fiican wuxuuna isaga oo ka hadlaya yidhi: “Willian si xor ah ayuu goolal u dhalinayaa, isagu waa ciyaartoy ay waajib nagu tahay in aanu xisaabta ku darsano sababtoo ah awoodiisa uu ku darbayn karo. Isagu waxa uu ugu dhawaan ku jiraa qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa xili ciyaareedak”.
Barcelona ayaa kulanka Camp Nou u baahan in kaliya ay ilaashato natiijadii kulankii Stamford Bridge inkasta oo uu Valverde doonayo in ay kooxdiisu guul gaadho laakiin Chelsea ayaa ku qasban in ay ugu yaraan gool ku dhaliso Camp Nou si ay u soo bixi karto isla markaana ayna ogolaan in Barca ay wax goolal ah dhaliso.